China N'ogbe agbanwe sisal ọkọ post mgbidi n'akụkụ cat osisi scratching cat post Manufacturer na Supplier | J & E
2 Pet (Tree / Tower / ọkọ)
3 Pet Ejiji
4 Pet nhicha Products
8 Nkwado Discount
Iju DC Disney Pet Products
N'ogbe agbanwe sisal ọkọ post mgbidi n'akụkụ cat osisi scratching cat post
OverviewQuick DetailsType: Pet ToysToys Type: Interactive ToysMaterial: Sisal ClothApplication: CatsFeature: Eco-FriendlyPlace nke Si Malite: Zhejiang, ChinaBrand N ...
Good Quality, ezi ọrụ, ezi price na elu arụmọrụ bụ anyị azụmahịa edumbet. Base na na, anyị na ngwaahịa na e rere ndị North American, European, Korea na Japan .Unu ụtọ na anyị a aha ọma na ndị a ahịa. N'ihi na-emepe emepe ọzọ azụmahịa na anyị ochie na ndị ọhụrụ ahịa, anyị ike anyị sourcing na imewe ngalaba maka ọhụrụ Pita ihe na ụbọchị ọ bụla.
cat ọkọ post
cat osisi ọkọ post
Egwu na-akpọ Cat Ụmụaka
cat osisi juru n'ọnụ site katọn
Ibu (Set) 1 - 1 > 1
Est. Time (ụbọchị) 15 Ka negotiated
Nke a kacha ọhụrụ na Cat ọkọ Tree bụ kacha n'ụlọ ọ bụla nwamba, Ọ na-agwakọta scratching, perching, achụ, rịa, inyocha, zuru ike na justplain fun niile ebe a, The plush kapet n'elu-enye amara comfort.The akpa na-ọbọp na sisal ụdọ gị anu ulo ka ọkọ na play na. The sturdy isi na-egbochi ọ bụla swaying mere na ọ bụ mma na bụla ewepụghị elu otú ị na-adịghị echegbu onwe banyere mmerụ gị cat; The nkecha cat osisi ga-ngwakọta na na gị ihe ndozi.
ihe Sisal Cloth
Size & arọ 30 * 30 * (40-60) cm
oge Mbuga ozi 35 ụbọchị mgbe natara ego
T / T, L / C wdg
1.Do i nwere ngwaahịa?
♦ Ee, anyị nwere ike na ụgbọ mmiri na ụbọchị 1.
2.Did ị na-ere na Amazon?
♦ Ee, anyị nwere ike ụgbọ mmiri ka FBA nkwakọba.
3.Can ị ahaziri agba?
4.We chọrọ chepụta anyị ngwugwu, ok?
♦ N'ezie, giftbox, ọnya kaadị, Eyi akpa ma ọ bụ ndị ọzọ ị ka ya?
5.How ihe ị tinye anyị logo?
♦ Site silk printe, ma ọ bụ kwaa ma ọ bụ ndị ọzọ ị na-ekwesịghị
6.Is ya irè mix aka ekpe & n'aka nri ma ọ bụ ọtụtụ ihe nlereanya?
7.Can ị mix ọtụtụ ụdị maka a set?
♦ Ee, nke ụdị ị dị n'ihi na a ngwakọta?
Previous: China N'ogbe ọhụrụ cat toy eto Christmas corrugated cat scratcher katọn
Next: Portable ịkpakọba Safety Herọd ngere Nche ntupu Pet Magic Gate ntupu Dog Safety Gate
Factory eco-enyi na enyi plush agba aja aja cat sisal scra ...
Pet Products Cat Scratcher ọkọ pad na ...
N'ogbe multifunction Pet Products Cat Ụmụaka T ...
Hot-ere na-akpa ọchị sisal ákwà ọkọ post cat tre ...
Interzoo - ahia ngosi maka ngwaahịa utari ...
© Copyright - 2010-2021 : All Rights Reserved. Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile
Pet Ejiji , Dog Ejiji , Pet Grooming Comb, Master Grooming Tools, Pet nhicha & Ejiji Products , Pet Ejiji uwe aka ,